Russia maliteghachi ụgbọ elu Iraq, Kenya, Slovakia na Spain, ụgbọ elu Afghanistan ga -echere
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Russia maliteghachi ụgbọ elu Iraq, Kenya, Slovakia na Spain, ụgbọ elu Afghanistan ga -echere
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Iraq na -agbasa akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa Russia • Safety • Akụkọ kacha ọhụrụ na Slovakia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Russia maliteghachi ụgbọ elu na Iraq, Kenya, Slovakia na Spain, ụgbọ elu Afghanistan ga -echere
Dị ka ụfọdụ akwụkwọ gọọmentị Russia si kwuo, emebebeghị mkpebi maka ịkwadebe ụgbọ elu ndị nkịtị na Kabul na ịnye ohere maka ha na nhazi oge site na ụgbọelu ụgbọelu Russia. Ọ ka akaghị aka ikwu maka mmalite ụgbọ elu obodo ebe ahụ oge niile.
Russia ga -amalite mba anọ ọzọ malite ọrụ ikuku.
Ụgbọ elu si Moscow na Kenya, Slovakia, Iraq na Spain malitegharịrị.
Enweghị ụgbọ elu si Russia na Afghanistan.
N'ihota etiti ọgba aghara mgbochi COVID, gọọmentị Russia kwupụtara taa na Russian Federation ga-amaliteghachi ọrụ ụgbọ elu njem njem oge niile na Iraq, Kenya, Slovakia na Spain malite na Septemba 21, 2021.
"Russia maliteghachiri ọrụ ikuku na Spain, Iraq, Kenya na Slovakia site na Septemba 21," ndị ọrụ ahụ dere na gọọmentị Russia Federation. telegram ọwa.
A ga -amaliteghachi ụgbọ elu Egypt na Turkey site na obodo Russia anọ ọzọ - Pskov, Magadan, Murmansk na Chita site na Septemba 21.
N'otu oge ahụ, ndị ọchịchị Russia kwupụtara na ha adịghị njikere iweghachi njem ụgbọ elu ndị njem na Afghanistan mgbe niile.
Dị ka ụfọdụ ndị ọchịchị gọọmentị Russia si kwuo, mkpebi maka ịkwadebe ụgbọ elu ndị nkịtị nkịtị na nnabata na enyebeghị ohere maka ha na nhazi oge site na ụgbọelu ụgbọelu Russia. Ọ ka akaghị aka ikwu maka mmalite ụgbọ elu obodo ebe ahụ oge niile.
Iji maliteghachi nkwurịta okwu na Kabul, a ga-achọ mkpebi kwesịrị ekwesị nke isi ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iji gbochie mbubata na mgbasa nke ọrịa COVID-19.
A ga -ebu ụzọ mepụta akụrụngwa ọdụ ụgbọ elu dị na Kabul iji hụ na ọrụ ndị na -ahụ maka ikuku dị ka ụkpụrụ nchekwa ụgbọ elu obodo si dị.
Ekwuru na mbụ na ndị ọchịchị Taliban kwupụtara ọchịchọ ha ịmaliteghachi njem ụgbọ elu na Russia na Turkey.